Lafta-Gareen oo dib ugu soo laabtay dalka | KEYDMEDIA ONLINE
Lafta-Gareen oo dib ugu soo laabtay dalka
Madaxweyaha Dowlad-goboleedka Koofur Galbeed Cabdicasiis ‘Lafta-gareen’ ayaa dib ugu soo laabtay dalka, madax ka tirsan DF iyo dad shacab ah ayaan si weyn ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde.
MUQDISHO, Soomaaliya - Madaxweynaha Maamulka Koofur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed ‘Lafta-gareen’ ayaa saakay dib ugu soo laabtay dalka, kadib safar dhowr todobaad qaatay oo uu ku joogay dalka Turkiga.
Cabdicasiis ‘Lafta-garenen’, ayaa dalka ka maqnaa tan iyo bartamihii bishi hore, markaas oo safar ay u jeedkiisa qaban-qaabisay Dowladda Fadaraalka uu ugu ambabaxay Dalka Turkiga.
Sida Keydmedia Online, hore u baahisay, Wakiillada Beesha Caalamka ee Soomaaliya ayaa Lafta-gareen cadaadis ku saaray inuu dalka dib ugu soo laabto, ugu danbeyn Sabtiga, hayeeshee uu yimid maanta oo Axad ah, si loo guda galo qabsoomidda shirka wada tashiga.
Madaxweynaha Koofur-Galbeed, oo loo tix galiyo inuu yahay shaqsiga ugu dhaga nugul Madaxweymaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, marka loo eego Madaxda kale ee Maamul Goboleedyada ayaa Safarkiisa ku soo aadiyay, kadib markii uu Farmaajo, iclaamay shir ay isugu imaanayaan Madaxda DF, DG, iyo GB.
Lafta-gareen ayaa ahaa kaliya Madaxweynaha ka maqan dalka, waxaana imaanshiyiisu fududeyn doontaa, inuu furmo shirka wada tashiga ee looga arrinsanayo, doorashooyinka waddanka, kaas oo Beesha Caalamku qaban-qaabisay.
Maamulada KG, GM, iyo H/SH, oo taabacsan nidaamka Farmaajo ayaa hore ka biya diiday ka qeyb galka shirka ka dhacaya teendhada Afisyooni, iskastoo ugu danbeyn lagu qanciyay, sida ilo xog ogaal ah sheegayaan.